Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah
Arbacada, February 6, 2019 Arbacada, February 6, 2019 Douglas Karr
Tani waa soo koobitaan weyn oo badan oo ka mid ah isbeddellada aan ku dhufaneyno macaamiisheenna - raadinta dabiiciga ah, raadinta deegaanka, raadinta moobiilka, suuqgeynta fiidiyowga, suuqgeynta iimaylka, xayeysiinta lacag bixinta, jiilka hoggaaminta, iyo suuq-geynta waa isbeddello muhiim ah.
Waa wax run ah oo run ah oo aad u baahan tahay inaad ku xirnaato tirakoobyada ugu dambeeyay ee suuq-geynta suuq-geynta iyo isbeddellada ugu kulul ee istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah si aad u sii ahaato mid wax ku ool ah 2019 iyo wixii ka dambeeya. 7-da Ugu Wanaagsan ee Waa inaad ku Ogaataa Olole Suuq Digital ah oo guuleysta wuxuu leeyahay farabadan tirakoobka suuq-geynta oo u noqon kara talooyin toos ah oo toos ah oo lagu xayeysiinayo ololayaasha suuqgeyntaada, oo ay ku jiraan go'aaminta dhererka ugu habboon ee loogu talagalay qoraaladaada iyo emaylkaaga ama ka dhigista tabahaaga SEO waxtar badan.
Faahfaahintaan layaabka leh ee la taaban karo ayaa aad u badan wax kasta oo ay tahay in urur kastaa ka fikiro sida ay u horumariyaan istiraatiijiyadooda suuq geynta dijitaalka ah isla markaana u fuliyaan ololeyaal ka dhan ah Oo ay ku jiraan:
Dhiciyaan Search Engine (SEO) - Tani waa qodobka kaliya ee ugu muhiimsan ganacsi kasta maxaa yeelay wuxuu raadiyaa ujeedo isku mid ah. Haddii aan shey ama adeeg ka raadinayo khadka tooska ah, fursadaha ayaa ah inaan diyaar u ahay inaan wax iibsado. Wajiga, 57% ee suuqleyda B2B ayaa sheegay qiimeynta ereyada muhiimka ah inay dhaliyaan hogaamin ka badan dadaalada kale ee suuqgeynta.
Naqshadeynta Mashiinka Raadinta Maxalliga ah (SEO-ga Gudaha) - Haddii aad tahay meherad maxalli ah, ka muuqashada khariidadda Google ayaa muhiim ah - 72% macaamiisha sameeyay baaritaanka maxalliga ah waxay booqdeen dukaan u jira 5 mayl. Google My Business hadda waxaa loo yaqaanaa adiga websaydhka labaad.
Raadinta Mobaylka - kalabar dalka ayaa baaraya taleefankooda ka hor inta aysan sariirta ka soo kicin 48% dhammaan macaamiishana waxay billaabaan cilmi baarista moobiilka iyagoo raadinaya qalabkooda. Kharashka xayeysiinta raadinta moobiilka ayaa sii kordhaya - oo lagu qiyaasay in ka badan $ 20 bilyan.
Media Social Suuq - wacyi gelinta iyo balaadhinta ayaa si layaableh sifiican ugaga shaqeeya si caadi ahaaneed iyo xitaa xayeysiiska lacagta lagu bixiyo ee Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest iyo LinkedIn. Intaas oo kaliya maahan, magacyadu waxay leeyihiin fursad ay ku dhistaan ​​beelahooda oo runtiina ay si shakhsiyadeed ula shaqeeyaan qabiilooyinkooda.
Suuqgeynta Fiidiyowga - Ma lihi hal macmiil oo aanan u hirgelinayn nooc ka mid ah istiraatiijiyadda fiidiyowga. Waxaan u dhisayaa istuudiyaha fiidiyowga hal macaamil oo loogu talagalay fiidiyowga bulshada ee waqtiga dhabta ah, waxaan haystaa fiidiyoow muuqaal ah oo loo yaqaan 'loop loop loo yaqaan' oo loogu talagalay macmiil kale barta uu ka shaqeynayo, waxaan kaliya u daabacay fiidiyow sharraxaya muuqaal ah macmiil kale, waxaanan soo saaraynaa wax soo saar sheeko fiidiyoow wali macmiil kale. Fiidiyowgu waa mid la awoodi karo oo xawaaraha ballaadhku mar dambe ma aha arrin markii la gaarayo dhagaystayaashaada. 43% dadku waxay rabaan inay wax badan oo fiidiyow ah ka arkaan suuqleyda!
Email Marketing - emaylka qabow ayaa sii wadaya wacyigelinta iyo fursadaha kooxaha iibka. Kala soocida iyo shaqsiyadeynta shaqsiyadeed ayaa sii wadaya helitaanka heerar fur furan iyo guji-ilaa. 80% dadka isticmaala e-maylka waxay ku helaan akoonnada emaylkooda aaladda moobilkooda, sidaas darteed naqshadeynta jawaabta moobiilku waa waajib.
Xayeysiinta Lacagta ah - iyada oo tirada kanaalka iyo hababku sii kordhayaan, iyo barashada mashiinka iyo caqliga macmalka ah ayaa hagaajinaya meelaynta iyo yaraynta kharashyada, xayeysiinta lacagta la siiyaa waxay noqoneysaa mid aad uga waxtar badan kuwii hore. Raadin lacag leh, bulsho lacag leh, waxyaabo la kafaala qaaday, xayeysiis fiidiyow ah, iyo tiro kale oo xulashooyin ah ayaa halkaa uga jira shirkadaha inay ka faa'iideystaan.
Generation Lead - dhisida dalab leh bogag soo degid beddelaad leh iyo wadista wadista halkaas oo si taxaddar leh loo abaabulay, si otomaatig ah, iyo safarada macaamiisha la bartilmaameedsaday ay noqonayso mid ka mid ah istiraatiijiyad suuqgeynta dhijitaalka ah ee ugu wax ku oolka badan tobanka sano.
Content Suuq - macaamiisha iyo ganacsatadu si isku mid ah ayey u sii wadaan is-toosinta iyo baaritaanka ku soo iibsashadooda internetka. Iyada oo buuq badani halkaas ka jiro, shirkadaha ayaa lagu qasbay inay waqti iyo tamar badan geliyaan dhismaha waxyaalaha sida dhabta ah natiijada u horseeda, laakiin markay sidaas sameeyaan, waa qaab wax ku ool ah oo la awoodi karo oo lagu soo jiito macaamiisha.
Waa tan faahfaahinta buuxda, xoojinta weyn ee koritaanka iyo istiraatiijiyadaha ay tahay in meheraddaadu dejiso:
Tags: qoraaContent Suuqqoraalka googlexayeesiinta mobilemarketing mobileMedia Social Suuq
Sida Loo Abuuro Istaraatiijiyad Suuq Geyn Facebook Oo Guul Leh
Fiican muuqaal raadis ah! Waad ku mahadsantahay wadaagida tan.
Shaqo wacan, Doug. Ma sahlana in la helo dhammaan isbeddelladan dhowaanahan iyo xogta taageerada ah ee muuqaalka kooban. Mahadsanid!
Kani waa faahfaahin muuqaal ah. Laakiin waxyaabahan saxda ah miyaanay sidoo kale ahayn saadaalin 2012? Waxaan ula jeedaa suuqgeynta moobiilka, suuqgeynta waxyaabaha, warbaahinta bulshada - marka laga reebo darajada qoraaga.
Shaki kuma jiro!